Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Hdị H - N'ogbe diffusers maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Nkwụnye ike & mpụga Hdị H
A na-eji Hdị H naanị na Israel na Palestine. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke ụwa nke ụwa na plugs / soket ha dị iche iche)
Igwe prọfesọ amị 16 a bụ ihe pụrụ iche nye Israel. Ọ nwere akụkụ anọ dị 4.5 gburugburu, na-agbanye 19 mm n'ogologo ma na-akpụ triangle. Oghe ahịrị ahịrị na eke dị iche iche na-anọkarị n'etiti 19 mm dị iche. Oghere dị n'etiti etiti mkpụrụ etiti na etiti etiti ahịrị ahụ na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 9.5 mm.
Outdị ụzọ H na-anabatakwa ụdị C plọg. Nke a abụghị ikpe tupu 1989, mgbe ụdọ Israel ka nwere ọnụ. Ebe a na-ahụ maka ọkụ eletrik kemgbe 1989 na-anabata ma plọg na okirikiri plọg. Pldị plọgịnụ mbụ ahụ pịakọtara ọnụ aghọọlazila onwe ha, mana enwere ike ịchọta ha mgbe ụfọdụ. A na-ejikwa plọg a na West Bank na mpaghara Gaza niile.
Na -ekwuzi hoo haa, ụdị sọks H na-emegide ụdị E or ụdị F plọg, n'ihi na dayameta nke Israel kọntaktị anya dị 0.3 mm dị obere karịa ụdị nke E/F plọg. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-agbanye ike n'ezie, ị nwere ike itinye ike ụdị plọg ndị a na mpụga Israel. Buru n'uche, na ngwa ahụ agaghị aghaghari, ma ọ siri ike iwepụ nkwụnye ahụ!
Hdị H pọpụịk so n'ime ndị kasị dị ize ndụ n'ụwa: sdị ahụ anaghị edozi (yabụ, pinks adịghị enwe mkpuchi ojii iji wepụta ahụ plọg dịka ụdị C, G, I, L or N plọg), nke pụtara na ọ bụrụ na ụdị H nkwụnyepụ adọpụ abụọ, a ga-ejikọ otu aka ya na oghere! Littlemụaka na-etinye ihe egwu n'ihe ọkụ mgbe ha dọpụrụ plọg dị otú ahụ ma tinye mkpịsị aka ha na ya. Notdị H na-apụtaghị na mgbidi ahụ, yabụ ha anaghị enye nchebe ọ bụla site na imetụ paịlị ahụ.
Plugdị Ike & Mpụga Idị M